CYBERFESTIVAL Ngwá Agha Nuclear Free - Marchwa March
Home » Noticias » Nkwukọrịta Ozi » CYBERFESTIVAL Na ngwá agha nuklia
Achịkọta ihe omume CyberFestival World Cultural FREE OF NUCLEAR 190
Citizensmụ amaala nke ụwa nwere ikike ime emume ịbanye na Nkwekọrịta maka mmachibido Ngwá Agha Nuclear (TPAN) ga - eme na United Nations na 22/1/2021. Enweela ya site na ntinye aka nke mba 86 na nkwado nke 51, nke anyị na-ekele maka obi ike ha weghara nnukwu ikike nuklia. N'ime ICAN, mkpọsa nke kwalitere ya na ihe kpatara ya nwetara Nrite Nobel Peace na 2017. Thesebọchị ndị a, a na-eme ihe karịrị 160 ihe omume na mba dị iche iche iji kwado ya.
CyberFestival a bụ otu n’ime ha. Ọ na-ezube inye obere onyinye ya na usoro nke ga-aga n'ihu ịgbasa ruo mgbe ekpochapụrụ ngwa agha nuklia na mbara ala ma tụgharịa peeji a na isi ọchịchịrị nke mmepeanya mmadụ.
Ruo awa 10 na-adịghị akwụsị akwụsị, a ga-agbasa usoro mmemme nke vidiyo site na channelụ Zoom na Facebook nke na-enyocha ihe nkiri na ememme maka udo na imegide ngwa agha nuklia na abụ ihe atụ, nkwupụta, omume na nkwado nke mmadụ si ụwa Omenala, egwuregwu na mpaghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ihe akaebe sitere na ndị na-ede akụkọ ihe mere eme na nke ugbu a, nkwupụta Nobel Peace Prize, nkwado sitere na ndị omeiwu na obodo, nkwado site na nzukọ, ọbụlagodi omume na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ụmụ amaala nkịtị, ndị na-eto eto na ụmụaka ụlọ akwụkwọ. na njem ha, ihe ngosi, mmemme na mkpokọta, ụlọ akwụkwọ, mahadum na akara nke Udo na-agbachitere ihe niile metụtara ụwa na-enweghị agha yana, n'ezie, enweghị ngwa agha nuklia.
Na nke a CyberFestival World Cultural FREE OF NUCLEAR Ngwá Agha ¡Nnukwu ihe maka ụmụ mmadụ! A na - anakọta ihe omume 190 nke otu narị otu narị na narị puku mmadụ sitere na mpaghara niile na - esonye.
:Bọchị: 23 de enero de 2021
Nhazi: Cyberfestival ga-amalite na 10:30 GMT-0 wee kwụsị na 20:30 GTM-0.
Ogwe nke mbụ na nke ikpeazụ, nke ga-ewe otu elekere kwa, ga-arara onwe ya nye iji kpọsaa njikọ nke mmemme ụlọ ọrụ kachasị mkpa nke mere na ikike nke TPAN n'isi ụlọ ọrụ United Nations.
Oge 8 n'etiti etiti dabara na akụkụ 8, nke ọ bụla ga-amalite site na iwebata na ọdịnaya ya. A na-emegharị ọdịnaya ahụ n'ihe dịka mpaghara mpaghara ọ bụla: Oceania-Asia na Europe-Africa-America.
Fọdụ bụ ihe mere eme ma gbasatara nnabata mmemme na onyinye e gosipụtara oge.
Ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ ka ukwuu, bụ omume na onyinye enyere na afọ ndị na-adịbeghị anya maka udo na, ọkachasị, mkpochapụ ngwa agha nuklia.
Enwere mmemme zuru ezu na ọdịnaya niile, usoro ihe omume na ndị sonyere.
Ndị ọzọ ọdịnaya: Na mgbakwunye na ọdịnaya ndị edeturu, ụfọdụ akwụkwọ akụkọ na ozi gbasara Ihe omume 157 na ụbọchị ndị a site na nzukọ ICAN na-eme mpaghara ụwa niile.
Ọ dị mkpa na-eme ka ọhụụ ọhụụ a pụta ìhè. Dịka anyị niile nwere ike ịchọpụta, nkwenye nke TPAN, ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa n'ụwa, adịghị na peeji nke akwụkwọ akụkọ buru ibu ma ọ bụ mepee akụkọ nke nnukwu netwọkụ TV. Ọ bụ ọnọdụ na n'ọtụtụ mba ndị gọọmentị kwadoro na / ma ọ bụ kwado TPAN ụmụ amaala ha amaghị ya. Enwere usoro mkpuchi nzuzo nke okwu a site na mgbasa ozi. Ọ bụ ya mere anyị ji etinye aka iji mee ka eziokwu a dị mkpa na ọkwa a ma ama n'ụzọ mara mma, na-enye ya mgbasa kachasị ma na-akwado ọchịchọ nke ndị na-eto eto bụ ndị na-emegide ngwa ọgụ ndị a.
Dị na ndekọ
N'iburu ogologo oge, a ga-edekọ ọdịnaya ikpeazụ ka e wee nwee ike ịhụ ya ọzọ n'oge ndị ọzọ dịka ọdịmma nke ọ bụla.
Nhazi: Ọ bụ ezie na MSGySV akwalitela ụzọ ahụ, CyberFestival a bụ nsonaazụ nke ọrụ njikọ ọnụ nke ọtụtụ ndị mmadụ na otu dị iche iche ma na-ekpuchi nnukwu mmekọrịta dị iche iche na mba.
Ọchịchọ a bụ ịmeghachi CyberFestival a mgbe otu mba ọhụrụ sonyere TPAN, na uto na uto ruo mgbe o mechara kpochapụ ya.
Nkwurịta Okwu nke withoutwa na-enweghị Agha na Ime Ihe Ike na ntinye ike nke TPAN
Mgbakọ Mgbasa Ozi na COSTA RICA: